Wararka Maanta: Sabti, Aug 4 , 2012-Guddoomiyaha Ururka UMMADDA oo Madaxweyne Siilaanyo ku Eedeeyey Qabsoomid la’aanta Doorashooyinkiii Golaha Deegaanka Somaliland
“Doorashada dowladaha hoose waa tan ugu muhiimsan uguna baaxad weyn doorashooyinka dalka ka dhaca. Waa seeska Dimuqraadiyadda Somaliland. Waxaa doorashadan ka abuurma xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo saddexda Xisbi Qaran, waxayna gogol xaadh u tahay doorashada Madaxtooyada”ayuu yidhi gudoomiyaha ururka UMMADDA Gaboose, waxaanu intaas ku daray “ Waxa nasiib-darro ah, in doorashadii dawladaha hoose ee ugu horeysey uguna danbeysey ay ka qabsoontay dalka 2002-dii taasoo laga dheehan karo inay muddo dheer golayaasha deegaanku ku fadhiyaan, kuna maamulaan dalka sharci-darro. Waxay noqdeen aalad u nugul musuqmaasuqa iyo in looga taliyo Qasriga Madaxtooyada, taasoo ka saartay meesha madaxbanaanidoodii iyo la xisaabtankii dadweynaha”.
Gaboose waxa uu sheegay in haddii doorashadani golaha deegaanku dib u dhacdo ay keenayso inay doorashadda baarlamaanka iyo madaxtooyaduna dib u dhacdo taas oo wakhtigii uu madaxweynuhu mucaaraad aha aad uga soo hor jeesan jiray.
“Waxaase xilka iyo waajibka Dastuuriga ahi ka saaran yahay madaxweynaha inuu sugo qabsoomidda doorashooyinka dalka xilligii loo qorsheeyey, keenana dhaqaalaha ku baxaya, dhamaystirana shuruucda doorashooyinka, diyaariyona jawi nabadgelyo iyo xasilooni ah oo ay doorashooyinku ku dhici karaan si xor ah oo xalaal ah”ayuu ku canaantay madaxweyneha gudoomiyaha ururka ummadda.
Guddoomiyuhu waxa uu tilmaamay in dadaal badan ay galeen guddida Doorashooyinku, balse ay la kulmeen caqabado badan oo farsamo iyo culays dhaqaale oo kaga yimid tirada ururada iyo asxaabta oo aad u badan iyo isbedelka habka doorashada ee loo guurey liiska furan oo ah in musharax kastaaba gaarkiisa u tartamo.
Gaboose waxa uu sheegay in qorshihii ay soo jeediyeen guddida Doorashooyinku ay ku diideen labadda gole ee baarlamaan, isla markaana ay ahayd inay qadariyaan talooyinka ay soo jeediyeen guddidu.
“Maaha in Komishanka Qaranku Dhibane u noqdo oo ku dhexwareego xafiisyada Nairobi, Madaxtooyada iyo kuwa Golayaasha Qaranka iyadoo ay tahay adiga waajibkaagii Qaran, dhirindhirinta dhammaan hawlaha suurto-gelinaya doorashadu inay waqtigeedii ku qabsoonto”ayuu mar kale ku dhaliilay Gaboose madaxweynaha .
Gudoomiyuhu waxa uu madaxweyne ku eedeeyey inuu doonayo inuu wakhti siyaasado ah kursigii ku sii fadhiyo maadaama oo ahmiyad weyn aanu saareen inay doorasho dalka ka dhacdo “waxay bulshadu xog-ogaal u tahay muhiimadda gaarka ah ee aad siinaysid wadahadalka Somaliya iyo Sheikh Shariif, balse waxanu tuhunsannahay, iskabadaa dedaale, inaad dooneyso in doorashadu dib u dhacdo, si aad maalmo sharci-darro ah mustaqbalka u sii joogtid”.
Gaboose waxa uu madaxweynaha usoo jeediyey inuu soo kala dhexgalo baarlamaanka iyo guddidda Doorashooyinka ee isku khilaafsan qaabka doorashadda, maadaama hawlihii doorashooyinku u xaniban yihiin, isla markaana jadwalkii komishanka doorashooyinku sameeyeen uu noqdo mid midho dhalla, isagoo ku guubaabiyey in mudadii uu hore madaxweynuhu u sheegay inay doorashadu dhacayo ee sanadkan 2012ka kaga dhabeeyo.